ရပ်တန့်လိုခြင်းနှင့်ရပ်တန့်ရန်လိုအပ်ခြင်းတို့၏ခြားနားချက်ကဘာလဲ။ ၄၅ ရက်အပြီးကျွန်ုပ်၏အတွေးများ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ရပ်တန့်ရန်လိုအပ်နေနှိုင်းယှဉ်ရပ်တန့်ရန်လိုသောအကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ? 45 ရက်အကြာမှာငါ၏အကြံအစည်။
အဘယ်ကြောင့်အခြားသူများကိုမျိုးစုံ relapses နှင့်ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းမှတဆင့်ရုန်းကန်နေချိန်မှာတချို့လူတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာကာလကျော်မျှ FAP မှာဒါအောင်မြင်သောဖြစ်ကြောင်းထင်ရသနည်း? ထိုမေးခွန်းကိုတကယ်နောက်ကျငါ့ကို bugging ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အေးလိုက်ဖို့အဘယ်သူမျှမ FAP စာရင်းဇယား အဖြစ် relapse အပေါငျးတို့သဝမ်းနည်းဖွယ်ဇာတ်လမ်းများငါသည်ကိုယ်ကိုအောင်မြင်စွာအခမဲ့ PMO အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ပါလိမ့်ဘယ်တော့မှအံ့သောငှါအကြှနျုပျကိုထိတျလနျ့ခဲ့ကြပါပြီ။ ထိုအခါကနောက်ဆုံးတော့လျှပ်စီးတစ်မူလီကဲ့သို့ငါ့ကိုဝင်တိုက် ... ။ စိတ်အားထက်သန်စွာနှင့်အမှန်တကယ်မိမိတို့၏ PMO စွဲကိုချိုးဖျက်ဖို့လိုပါကြောင်းဤနေရာတွင်အများအပြား Fapstronauts ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါငါ့ဥစ္စာကိုချိုးဖျက်ဖို့လိုသောငါ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြစ်လျက်ရှိအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဖိုင်ဘာနှင့်အတူငါသိ၏။ အဲဒီဂုဏ်ထူးအလွန်အရေးကြီးပါသည်; တစ်ခုခုပြီးမြောက်ဖို့လိုအပ်နေနှိုင်းယှဉ်တစ်ခုခုပြီးမြောက်လိုသောအကြားသိမ်မွေ့ခြားနားချက်ရှည်လျားပုဂ္ဂိုလ်ရေးပနျးတိုအတွက်သော့ချက်အချက်အဖြစ်မှတ်ခဲ့သည်။
သင်ကိုယ်တိုင်အလေးအနက်ထားပြန်သွားကြသည်ဖို့ရမ္မက်ကိုပယ်စစ်တိုက်ခြင်းငှါရုန်းကန်တွေ့ပြီဆိုပါကသို့မဟုတ်သင်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကြိမ်ပြန်ရောက်သွားတယ်ခဲ့ကြပြီးစိတ်ဓာတ်ကြီးထွားလာလျှင်, ငါသည်သင်တစ်ဦးချင်နှင့်တစ်ဦးလိုအကြားမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အာဏာကိုခြားနားချက်ချန်နယ်သင်ယူတိုက်တွန်းကြသည်။ ငါ့ကိုမသက်ဆိုင်ပိုင်းတွင်သင်သည် PMO ရပ်တန့်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့သင့်ကိုယ်ပိုင်ဦးနှောက်၏တန်ခိုးကိုသုံးနိုင်သည်, ပထမဦးဆုံးဌာန၌အဘယ်သူမျှမ FAP ရန်ဒီနေရာကိုသင်သည်ယူဆောင်အရာကို, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ကြပါစို့။ PMO ရပ်တန့်ဖို့မီးလောငျလိုဤမျှလောက်ပိုပြီးထိရောက်သင့်ရဲ့ 90 နေ့က (သို့မဟုတ်ဘာပဲ) ရည်မှန်းချက် (အလိုဆန္ဒချင်တစ်တစ်လုံးကိုအဓိပ္ပာယ်တူ synonym ဖြစ်ပါတယ်) ပြီးမြောက်ရန်မျှသာ "အလိုဆန္ဒ" ထက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ post ကိုဂိမ်းအင်တာဗျူး၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် "သူတို့ကကျနော်တို့ထက်ပိုလိုချင်က" အထူးသဖြင့်နေ့၌ပိုပြီးပြုလုပ်လိုသောအဖြစ်အနိုင်ရတဲ့အသင်းကိုဖော်ပြထားသူတစ်ဦးဆုံးရှုံးအားကစားအဖွဲ့သည်နည်းပြ၏စကားကိုကြားအားလုံးမျှသံသယရှိသည်။ သို့သျောလညျး, အားကစားလေ့လာမှုများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တစ်ဦး PLAYOFF ပြိုင်ပွဲဒါမှမဟုတ်သူတို့မထက်ပိုပြီးမကြာခဏကြိမ်အနိုင်ရဖို့လိုအပျတဲ့တင်းကျပ်စွာအခြေအနေမှာမြို့ရိုးအတဘက်၌သူတို့ကျောရှိပါတယ်အခါ, တစ်ဦးကိုအပူတပြင်းကိုမီးရှို့လိုအတူနေတဲ့အဖွဲ့က Victor အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာမည်ကို။ ပြသကြ အောင်မြင်သောနည်းပြများနှင့်ခေါင်းဆောင်များသူတွေဟာသူတို့ကိုတသမတ်တည်းရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးဖို့အဓိကခြားနားချက်ကိုလှုံ့ဆော်ဖို့သင်ယူပါ။
ဤတွင်ကျွန်မအကြောင်းပြောနေတာငါအရာကိုအခြားဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခန့်မှန်းခြေခုနစ်ဆယ်ငါးသန်းအမေရိကန်တွေသူတို့ကိုယ်အလေးချိန်ချင်ကြောင်းပြောကြပါတယ်။ America မှာကိုယ်အလေးချိန်တစ်နှစ်ခြောက်ဆယ်ဘီလီယံဒေါ်လာတစ်နှစ်စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်လာသည်နှင့်အကကိုဆင်းစီးပွားရေးကိုရှိနေသော်လည်းကြီးထွားဖို့ဆက်လက်သိရသည်။ သို့သျောလညျးအလေးခြိနျဆုံးရှုံးဖို့ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုမိမိကိုယ်မိမိအမည်ခံ Desire ရှိနေသော်လည်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်ယခုကြှနျုပျတို့အစဉ်အဆက်ထက် fatter ဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်သနည်း လိုခငျြနှင့်နှစ်လိုဖွယ်သောကြောင့် (အလိုဆန္ဒလိုတဲ့တစ်လုံးကိုအဓိပ္ပာယ်တူ synonym သည်) ခဲအောင်မြင်သောရေရှည်ရည်မှန်းချက်ဆည်းသို့ဘာသာပြန်ဆို။ ကျနော်တို့နွေရာသီအားလပ်ရက်မတိုင်မီအနည်းငယ်ပေါင်ဆုံးရှုံးဖို့လိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့အစားအစာအပေါ်သွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟာပိုကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အဝတ်စတာတွေသို့ fit မှလိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သေးကျနော်တို့မကြာခဏပူပြင်းတဲ့ fudge ဆွန်ဒါသို့မဟုတ်တစ်ဦးအပိုကြီးမားပီဇာနှင့်အိုးသို့တိုက်ရိုက်ပြန်သွားကြသည် ဘီယာအပြည့်အဝအစာအိမ် (ကဲ့သို့စကားလုံးချင်၏အခြားတစ်လုံးကိုအဓိပ္ပာယ်တူ synonym ဖြစ်ပါတယ်) ၏ခံစားချက်ကျေနပ်ကြောင်းကိုချောကျိကျိအစားအစာသို့မဟုတ် "likes" "likes" ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိသေးသောကွောငျ့။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် inertia နှင့်ပဋိပက္ခဖြစ်ပြည်တွင်းရေးအလိုဆန္ဒများကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေနေကြသည်။ သို့သော်ကိုယ်အလေးချိန်အောင်မြင်မှုအပေါ်အများအပြားလေ့လာမှုများလည်းပြုလုပ်သက်သေပြချက်ချင်းသူတို့အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာဝန်တစ်ဦးသို့မဟုတ်အခြားဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့အခွင့်အာဏာကိန်းဂဏန်းအားဖြင့်ပြောပြသည်ခံရပြီးနောက်အစားအသောက်ကိုစတင်တဲ့သူတွေကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာပိုမိုအောင်မြင်နိုင်ပါပြီ။ တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်အစားအသောက်များတွင်ရဲ့ start မှာရည်ညွှန်း၏လေ့လာမှုသင်တန်းသားများကိုယ်ပိုင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့တကယ်ဆုံးရှုံးဖို့သို့မဟုတ်ဆိုးရွားအကျိုးဆက်များရှိပါလိမ့်မယ်လိုခဲ့ဘူးထင်, ဒါသူတို့ဤမျှလောက်ပိုပြီးလှုံ့ဆော်ချင်သို့မဟုတ်တစ်ဦးတည်းအလိုဆန္ဒအားဖြင့်စတင်ခဲ့သူထိုအောင်မြင်ခဲ့ကြသည်။
သင်ဒီမှာလျှင်ဒီတော့အဘယ်သူမျှမ FAP သင်ပြန်သွားကြသည်နှင့်အခြိနျမှနျမှရုန်းကန်ဆက်လက်လျှင်စိတ်ဓာတ်မကျပါကျေးဇူးပြုပြီးကြိုးစားကြဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့စမ်းသပ်မှုများကဲ့သို့သလိုပဲ။ အကြောင်းမူကား, သငျသညျဍိပက္ခများနှင့်စိန်ခေါ်ခံရဖို့အဘို့အဘယ်သူမျှမ FAP ရန်သင့်လက်ရှိချင်နှင့်အလိုဆန္ဒသေးအရေးပေါ်လိုမပါလျှင်၎င်းသည်ဿုံပုံမှန်ပါပဲ။ သင်အမှန်တကယ်အောင်မြင်ချင်လျှင်မူကားသင်အမှန်တကယ်သင်သည် PMO ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့လိုသည်ကိုသင်တို့သိလျှင်, သင်ပြန်သွားကြသည်ရန်သွေးဆောင်မှုအသီးအသီးများနှင့်အခါတိုင်းဖြတ်သန်းသည်အထိအတွင်းစိတ်ခံစားချက်, ကိုမီးရှို့လိုနောက်တဖန်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့နဲ့ဘယ်တော့မှ FAP ကြောင်းဖန်တီးကြောင်းတက် amp မှလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ် ကဖြစ်ပျက်။
သင်အလွယ်တကူမျှ FAP အောင်မြင်မှုသင်သည်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးကိုမီးရှို့လိုသို့ပေါ့ပေါ့ချင်သို့မဟုတ် Desire ပြောင်းသင့်ကိုယ်ပိုင်ဦးနှောက်၏ကြီးမားပါဝါကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒီလိုဆောင်ရွက်မှတစျခုမှာမျှမျှတတလွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုသင်ကူညီပေးရန် (ကသူတွေဟာနေသူများကဖန်တီးပင်လျှင်) ကွောကျရှံ့ခွငျး၏မယုံနိုင်စရာပါဝါချန်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ စာကြည့်တိုက်သွားပြီးအသေးစိတ်အတွက်ဒီလိုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုတခုတခုအပေါ်မှာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ primer အဖြစ်တိုနီ Robbins သို့မဟုတ်အလားတူမိမိကိုယ်ကိုအကူအညီနဲ့စာအုပ်တွေနေဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ပါဝါတစ်ဦးမိတ္တူဖမ်းပြီး။
ဒီနေရာတွင်လက်ရှိ relapse ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ, အတှေးအများနှင့်ခံစားချက်များကိုနှင့်အတူဆိုးဆိုးရွားရွားရုန်းကန်ဖြစ်ကြောင်းဟန်ဆောင်တစ်ဦးကအလွန်အခြေခံဥပမာပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လူအများစုကဲ့သို့သင်ဖြစ်နိုင်လည်းသူငယ်ချင်းမိသားစု, သို့မဟုတ်သူစိမ်းများက PMO ၏အမှန်တကယ်လုပ်ရပ်အတွက်ဖမ်းမိထားကြောင်းစိုးရိမ်နေကြသည်။ ဒါကြောင့်သင်သာ unlocked ရေချိုးခန်းတံခါးကိုနှင့်သင်၏ရေချိုးခန်းသို့မဟုတ်ရေချိုးခန်းဧရိယာကိုသုံးသင့်အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်မိဘမှတ်တမ်းများမှသော့ကိုင်ပြီးနှင့်အတူ k9 ကဲ့သို့သော filter ကို install လုပ်ပါ, တစ်ဦးအများပြည်သူခနျးသို့သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုရွေ့လျားခြင်းဖြင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်အကျိုးအတွက်ကွောကျရှံ့သောအသုံးချနိုင် ကြောင်းနီးပါးနောက်ဆုံးအောင်မြင်မှုအာမခံအောင်မြင်ဖို့အတူတူပင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ burring လိုဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်အသုံးချနိုင်ပါတယ် unlocked သင့်ရဲ့အိပ်ခန်းတံခါးကိုနှင့်အတူအိပ်သွားပါနှင့်သင့် window ကိုအရိပ်ပွင့်လင်းစသည်တို့ကိုဖန်တီးမှုဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးမျှသာအလိုဆန္ဒနှင့်အတူပင်တစ်စုံတစ်ဦးသို့မဟုတ်လုံးဝမ FAP ဖြည့်စွက်ချင်တယ်!